Madaxweyne Siilaanyo Oo Tacsi U Diray Marxuum Cabdilaahi Maxamed Faarax Oo Burco Ku geeriyooday | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hargaysa (SDWO): Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa tacsi u diray ALLE ha u naxariistee Marxuum Dhamme Cabdilaahi Maxamed Faarax (Soofadhiiste) oo ku geeriyooday xalay oo ay taariikhdu ahayd magaalada Burco ee gobolka Togdheer.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Muuse Biixi Cabdi Isagoo ku hadlaya magaciisa, ka dawladda iyo ka shacbiga Somaliland, waxa uu dhambaal tacsi ah u dirayaa, Ciidamada qaranka Somaliland, gaar ahaan Ciidanka Booliska, ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Marxuum Dhamme Cabdilaahi Maxamed Faarax (Soofadhiiste) oo ku geeriyooday xalay oo ay taariikhdu ahayd 31/01/2018, magaalada Burco ee gobolka Togdheer.
Tacsi taa la mid ahna waxa uu madaxweynuhu u dirayaa waxgaradka, waayeelka, aqoonyahanka, qoyskii, eheladii, qaraabadii, asxaabtii iyo shacbiga Somaliland ee uu ka baxay.
Marxuumka oo ahaa taliyaha qaybta taraafikada ee Togdheer ayaa ku geeriyooday shil gaadhi wakhti uu ku guda-jiray waajibaadkiisa shaqo, gacantana ku hayey shil ka dhacay agagaarka cigaal Hotel ee magaalada Burco saacadihii danbe ee xalay.
Waxaanu madaxweynuhu marxuumka ku sifeeyey taliye hawlkar ah oo ka baxay qaranka iyo ciidamada booliska Somaliland, ahaana taliye ku dayasho mudan.